Reacteur sosialy: 7,000 XNUMX ny mpanentana ara-tsosialy efa vonona | Martech Zone
Zoma, Septambra 27, 2013 Alakamisy, Septambra 26, 2013 Douglas Karr
ChaCha dia orinasa lehibe niarahako niasa nandritra ny fotoana elaela tamin'ny nanombohako ny masoivohako voalohany. Sarotra ny hino fa efa 8 taona ny ChaCha… mailaka ny orinasa ary mihetsika sy mihatsara hatrany. Tsy orinasa Valley izy ireo, noho izany dia tsy dia manintona foana izy ireo - fa mijanona hatrany amin'ny tranokala avo lenta eran'izao tontolo izao izy ireo amin'ny fivezivezena. Ary rehefa mandeha ny fotoana, hitako nanangona mpanaraka be dia be izy ireo. Ity manaraka ity niteraka fotoana vaovao ho an'ny orinasa.
Raha nisintona ny vondrom-piarahamonin'izy ireo i ChaCha hizara fahalalana, tsy nisy olona ivelan'ny tambajotra afaka niditra mivantana - mandra-pahatongany Reactor ara-tsosialy. Social Reactor dia sehatra dokam-barotra izay manampy ny marika hifandray amin'ireo mpihaino marina amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo mpitarika sosialy mitarika. Tambajotra premium, voafantina tamim-pieritreretana hanamafisana ny hafatrao ary hamorona fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny marikao.
Miaraka amin'ny influencer 7,000 mahery, ny tratry ny tambajotran'izy ireo dia somary mampihetsi-po - mahatratra olona an-jatony tapitrisa. Ny influencers dia alefa mba hahazoana antoka fa tsy ampiasaina ny teny ratsy, tsy mamitaka na oviana na oviana ny hafatra, ary aseho mazava ilay dokambarotra
Rehefa miditra ao amin'ny Reactor ara-tsosialy ny influencer dia omena lisitra voasokajy ho an'ny fampielezan-kevitra ankehitriny. Tsy rafitra mandeha ho azy ity ahafahan'ny Reactor sosialy manapa-kevitra ny amin'izay hanery sy hanao izany amin'ny anaranao. Ireo influencer dia afaka mamaky, mandinika ary mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra nofidiny. Azon'izy ireo atao ihany koa ny manara-maso ny kaomisionany - tsy miraharaha ny ahy satria vao manomboka aho;).
Raha influencer ianao, ny Social Reactor dia maniry anao eny an-tsambo koa! Izy ireo dia mitady mpiorina sosialy izay manana fifandraisana marina amin'ireo mpanaraka azy ireo. Izy ireo dia mitady mpitarika amin'ny fantsona sosialy izay mahatakatra ny mpihaino azy. Mila olona marani-tsaina izy ireo mahay mamorona hafatra mafonja izay mitaona ny mpihaino azy hanao zavatra. anjara Ireo mpanafatra ny Social Reactor ankehitriny.
Tags: chachamahita ny influencershery miasa manginamitaona ny marketingfampahalalam-baovao sosialyreacteur sosialy
Fianarana Pulse Digital Marketing 2013
Sep 23, 2015 ao amin'ny 10: PM PM
Mpanaraka firy no tokony hidiranao
Sep 24, 2015 ao amin'ny 3: PM PM
Salama Alison - Tsy azoko antoka ary tsy eo intsony ny fifandraisako! Azonao atao ny mifandray amin'izy ireo mivantana.